दलान नेपाल : मधेशमा 'राजनितीक आक्रोश' झनै वढदै
माघको अन्तिम हप्ता आन्दोलन मधेशी मोर्चाले आन्दोलनको स्वरुप परिर्तन गरेर आमहडताल र अवरुद्ध नाका सहज भए पनि तराइ मधेशका आम नागरिहरुको जिज्ञासा एउटै देखिन्छ, यत्रो आन्दोलनलाई पनि किन काठमाडौले सुनेनन ? हाम्रा मधेशी नेताहरु किन आन्दोलन त्यतीकै फिर्ता लिए ? के मधेशीहरुको आन्द्योलनको माग अव पुरा हुदैन ? यी र यस्ता प्रश्नहरुको चक्रव्युहमा तराई मधेश बल्झीएको देखिन्छ । तराई मधेशमा आजक जता जादा पनि यी र यस्तै खाले प्रश्नहरु तेर्साइन्छ । विरगंज कलैया सडकखण्डमा टेम्पु चलाउदै आएका वाराका संजय साह भन्छन, हाम्रा मधेशी नेताहरुकै कारण यत्रो आन्दोलन अफल भयो । याहा तराई मधेशका लाखौ लाख नागरिक सडक देखि वोर्डर सम्म प्रर्दशन गरीरहदा मधेशी नेताहरु काठमाडौमा वालुवटारको मुख किन ताकेर बसेका होला ? साह प्रश्न गर्छन ।
कलैयाका युवा नेता श्याम गुप्ताले यत्रो लामो आन्दोलनले पनि मधेशीहरुलाई अधिकार प्राप्तीको प्रत्याभुति नभएकाले आक्रोश झनै वढीरहेको बताउछन । गुप्ता भन्छन, सबै मधेशी नेताहरुले किन काठमाडौ छाडन सकेनन भनेर उनीहरु मधेशमा तीखो आलोचनाहरु हुने गर्छन । गुप्ताले थप्दै भने, काठमाडौ प्रति पहिला भन्दा पनि वितृष्णहरु फैलिरहेको देखिन्छ भने प्रमुख दलहरुले हाम्रो आन्द्योलनलाई सम्बोधन गरेनन भन्ने गहिरो घृणा मधेशमा फैलिरहेको छ ।
काठमाडौ प्रति थप आक्रोश वढदै
गायत्री मिश्रा, संचारकर्मी - जनकपुर
जनकपुरकी स्थानिय संचारकर्मी गायत्री मिश्रा भन्छिन, मोर्चाले माघको अन्तिम हप्ता आमहडताल र नाका सुचारु गर्ने निर्णयले मधेशीहरु जनजीजन सहज भए पनि मधेशको मनस्थिती पहिला भन्दा थप असहजता तर्फ उन्मुख छन । मिश्रा भन्छिन, नाका र आमहडताल खोलेर मोर्चाले ठिक गरे पनि आन्दोलनलाई ठिक ढंगले मोर्चाको केन्द्रिय तहले हाक्न नसकेको अनुभुति मधेशमा पाइन्छ । जसका कारण मधेशमा मधेशी नेतृत्वहरुको आलोचनाहरु भइरहेको तपाईले पाउनु हुन्छ । तर यसले काठमाडौ प्रति थप आक्रोश पनि वढदै गईरहेको उनको कथन छ । आम मधेशीको अहिले तपाईले एउटा समान बुझाइ पाउनु हुन्छ, मिश्रा भन्छिन, काठमाडौ अर्थात सरकार वा प्रमुख दलहरुले मधेशीहरुको यत्रो आन्दोलनलाइ सम्बोधन गरेनन ।
जानी खान ,जनकपुर
जनकपुर आन्दोलनका एक जना चर्चीत युवा अनुहार जानी खान भन्छन, मधेशी युवाहरुमा खासगरी व्यापक भडकावको अवस्था विस्तारै सिर्जना हुदै गईरहेको छ । खान भन्छन, मधेशमा यसले हिसांत्मक वातावरणको माहौल सिर्जना हुदै गईरहेको छ , जुन खतरनाक हो । खान भन्छन, यसपालीको मधेश आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरुले सकेजती संयमितता अपनाएको र शान्त्पिुर्णमा उभिएको भए पनि यसलाई सरकारी पक्षले वेवास्ता गरेर गम्भिर गल्ती गरेको छ । खानको विश्लेषण छ, काठमाडौले जती सजिलो सोचिरहेका छन, उनलाई त्यती नै महंगो मुल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ ।
पुन आन्दोलन चर्काउने तयारी
छ महिना लामो आमहडताल र अवरुद्ध नाका केन्द्रित आन्दोलनको कार्यक्रमको स्वरुप् परिर्वतन गरेको मधेशी मोर्चाले केहि महिना पश्चात पुन आन्दोलन चर्काउने वताइरहदा तराई मधेशमा समेत त्यसको तयारीहरु भईरहेको देखिन्छ । काठमाडौ वाट मोर्चाको केन्द्रिय तहले आन्दोलनको स्वरप् परिर्तन गरेको घोषणा गरे संगै मोर्चाका शिर्ष नेताहरु मधेश दौडाहामा लागेका छन । स्थानिय स्तरमा आफना नेताहरुसंगको भलाकुसारीमा व्यवस्त मोर्चाका शिर्ष नेताहरु विगत छ महिना देखि जारी आन्दोलनको वारेमा स्थानिय सतहको वारेमा विस्तृत छलफलहरु गरिरहेका छन । तमलोपा अध्इक्ष महन्थ ठाकुर गएको सोमवार वारा जिल्लामा त्यस क्षेत्रका चार ओटा जिल्लाहरुका पदाधिकारीहरु संग सनामुहिक रुपमा एक दिने छलफल गरे । त्यस पछि जनकपुर पुगेर त्यस क्षेत्रका आफनो स्थानिय नेताहरु सहित मोर्चाका सवै जिल्ला तहका अध्यक्षहरु संग समेत छुटै छलफलहरु गरेका छन । त्यसैगरी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो समेत यस्ता बैठकहरु र छलफलहरुमा व्यवस्त छन ।
नवलकिशोर सिंह, तमलोपा बारा अध्यक्ष
प्रमुख दलहरु सहित सरकारी पक्ष संगको संवाद असफल भए पछि मोर्चा आफनो अगामी रणनती वारेमा आन्तरिक रुपमा गृहकार्यमा जुटेको देखिन्छ । प्रमुख दलहरुले मोर्चाको सहमती वेगर नै गरेको संविद्यान संशोधन देखि सिमाकंनको सन्दर्भमा निर्माण गरिएको सरकारी सयन्त्रलाई मोर्चाले औपचारिक रुपमै अस्विकार गर्ने जनाएको छ ।
गएको सोमवार वारा जिल्लामा चार ओटा जिल्लाको बैठकमा सहभागी तमलोपाका वारा अध्यक्ष नवल किशोर सिंह भन्छन, काठमाडौले मधेशको मुद्धालाई सम्बोधन गर्न जती ढिला गर्छ, उनले त्यती नै वढी मुल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । मधेशीहरुको अधिकार आज न भोली दिनै पर्छ, सिंह भन्छन, जारी मधेश आन्दोलन अधिकारको सुनिश्चिता गराएरै छोडछ । सिह भन्छन, आन्द्योलन हामीले जती वेला चाहन्छौ त्यती वेला उठन सक्छ तर पछिल्लो चरममा छ महिना देखि जारी आन्द्योलनको समिकक्षा गर्नु पर्ने आवश्यकता भएकाले र आन्द्योलनको रणनितीमा केहि परिवर्तनको महसुस भएकाले अहिले मोर्चाले आन्दोलनको स्वरुप परिर्तन गरेको छ ।
शिव पटेल, सदभावना नेता विरगंज
नेपाल सदभावना पार्टीका महासचिव शिव पटेल आन्दोलन पुन उठदैनन भन्ने भ्रम काठमाडौले पालेर बसेको भए त्यो उनको पुन भुल हुने दावी गर्छन । पटेल भन्छन, मधेशी नेतृत्वहरुको अहिले आलोचना हुनु स्वभाविकै छ, तर मधेशको मनसिथ्ती अझै आन्दोलनमय नै छ ।
जनकपुर क्षेत्रमा आन्दोलनको क्रममा चर्चीत रहेको युवा आन्द्योलनकारीहरुको संस्था मधेश अधिकार संघर्ष समिती मासका संयोजक सरोज मिश्राका अनुसार मोर्चाले पछिल्लो समयमा लिएको रणनती ठिक छ । सरोज भन्छन, लामो बन्दहडतालले आम मधेशीहरुको सम्पुर्ण जनजीवन र क्षेत्रहरु प्रभावित भएका छन । त्यसैले अव रणनती परिर्वतन गर्दै मोर्चाले अगामी आन्दोलनको रेखा कोर्नु पर्ने हुन्छ । सरोज भन्छन, आन्द्योलनमा अहिले पनि आम मधेशीहरु सहभागी हुन्छ तर मोर्चाले उनीहरु जनजीवन देखि विद्यार्थीहरु भविष्य र व्यापारीहरुको व्यापारको वारेमा साचेर कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ । लामो बन्दीले याहाको सम्पुर्ण व्यापार चौपट भएको छ, लामो बन्दले विद्यार्थीहरुको पढाइ पुर्णरुपमा प्रभावित भयो, त्यसैले अवको रणनीती र भावी आन्दोलन पुर्ण बन्द भन्दा पनि प्रभावकारी र काठमाडौलाई सिधा प्रभाव पार्ने खालको हुनु पर्नेमा उनको जोड छ ।
सरोज मिश्र, मास संयोजक - जनकपुर
मधेशी मोर्चाले आन्दोलनको स्वरुप परिर्वतन गरे पनि मशाल जुलुस, स्थानिय तहमा विरोध सभा लगायतका कार्यक्रमहरु जारी राखेका छन । मोर्चाले अघि सारेको ११ बुदे माग प्रति मोर्चाले मधेशमा हस्ताक्षर समेत संकलन गर्दै छ । मोर्चाका नेताहरु भन्छन, प्रमख दलहरुले जसरी एक्लौटी रुपमा अघि वढीरहेको छ, यसले सेलाएको जस्तो हाल देखिएको मधेश आन्दोलन पुन चर्कन्छ । स्थानिय जनानकारहरु भन्छन, मोर्चाको दाबी पुर्ण गलत नभए पनि केहि समय चाही यसका लागी कुर्नु पर्ने हुन्छ ।